SIDA 2008: Ny ahiahy sy ny fanantenan’ny MSM sy ny manao anton’asa ny fananahana Afirikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Aogositra 2008 4:07 GMT
Nifarana tamin'ny 8 aogositra 2008 teo ny fihaonana momba ny SIDA 2008 (IAC) notontosaina tao Mexico. “Universal action now” na asa iarahan'ny rehetra manerantany atao izao no lohahevitra nobanjinin'ny fihaonana ary raha heverina ny fanatrehan'ny avy amin'ny vazantany efatra, ny fifantohana tamin'ireo vondron'olona nailakilaka ary ny fivoahan'ny gazety isan'andro natsaoina hoe “Global Voice”, dia tratra ny tanjona. Indro ary ny fijoroana vavolombelona avy amin'ny mpandray anjara Afirikana nandray anjara tao amin'ny fihaonana, ny fomba fijeriny nandritra ny 6 andro nisian'ny vovonana ary ny lohahevitra tiany hobanjinina amin'ny manaraka.
Naneho ny hafaliany noho ny fahitany ny ezaka ataon'ny mpikarakara ny hetsika ho fanohanana ireo vondron'olona voailakilaka (makorelina, pelaka, ary ny vahoaka indizeny)[miala tsiny ny mpandika teny raha mivantana toy izany ny dika satria efa mahalaza azy ireo teny ireo na dia ezahina fatratra aza ny hanamboaramboarana ny teny “hahamasina” ny fanaony] ny Dr. Nabulo Mabaso, tale lehiben'ny fiandraiketana ny fahasalamana ao amin'ny AIDS Healthcare Foundation toeram-pitsaboana ny SIDA antsoina hoe “Fanantenan'ny Vahoaka” ao Ithembalabantu any Durban. Na izany aza dia nohazavainy fa tokony itarina amin'ireo vondron'olona hafa voailakilaka ny banjina ary maninona moa raha hatramin'ny firenena mitoka-monina ankehitriny mihitsy aza:
Mbola voafetra ihany ny fahazoana mitsabo. Ohatra amin'izany ny firenena mifanolo-bodirindrina amiko, dia i Zimbaboe, izay tsy mitombina ara-politika, saingy mijaly kosa ny mponina ao aminy ary noho ny sazy mihatra aminy dia tsy hankany Zimbamboe ny mpamatsy vola. Antenaiko moa fa amin'ny farany dia hampiharina tokoa ny fahazoan'ny rehetra tsy anavahana mitsabo tena.
Monina any Bujumbura i George Kanuma ary mpikatroka ao amin'ny fikambanana miorina any Firantsa antsoina hoe Africa Gay sady mpikambana ihany koa ao amin'ny ANSS (Fikambanan'ireo mitondra ny tsimok'aretina VIH sy mararin'ny SIDA ao Burundi). Faly amin'ny nampivoitra ny lohahevitra momba ny MSM (Men having Sex with Men na lehilahy miray amin'ny lehilahy) sy ireo manao manao ho anton'asa ny fananahany tamin'ny fihaonana izy (fr) [dia lazao foana fa ny teny gasy hatrany no lava mandreraka]:
Na izany aza dia nohazavainy fa mbola matanjaka dia matanjaka ny fanavakavahana any amin'ny Firenena Afirikana miteny Firantsay, hoy ny fanazavany hoe (fr):
Misy ny firenena tahaka an'i Kamerona sy Senegaly no mbola mametraka ny homosexualité (mahapelaka) ho heloka bevava. [..] Misy ary moa ny tranga toy ny any Rwanda tsy afa-nivoaka ny firenena nisy azy ny filohan'ny pelaka lahy sy vavy satria notazonin'ny polisy misahana ny fifindra-monina ny pasipaorony.
Iray amin'ireo nahazo ny lokan'ny fehimenan'ny ONUSIDA 2008 ny Tetikasa Fimizore eto Madagasikara. Balou, iray amin'ireo sarimbavy “tena izy” sady manao ho anton'asa “ny fananahany” (aiza kosa?) sy i Jeannie mpiara-miasa aminy dia samy mpikambana ao amin'ny tetikasa ary samy nilaza ny ahiahiny sy ny fanantenany amin'ity fihaonana ity. Tahaka an'i Kanuma, dia navoitran'izy ireo ny tokony hamaranana hatreo ny fanilikilihana ny manasokajy ny fananahany ho fanaovana anton'asa raha tiantsika tokoa ny hiady amin'ny VIH/SIDA (mg):
“Ny fanilikilihana indrindra no manakana ny MSM sy ny TDS hikarakara ny fahasalamany […] Io moa dia eo ihany ny fomba-drazana antsika malagasy, raha ohatra hoe msm dia tsy tafiditra am-pasan-drazana. Raha amin’ny autorites dia mahafa-po fa raha amin’ny societe civile, mbola mila fivoarana.”
Farany, tsy vokatry ny tsy fahazakan'ny fiarahamonina ny fisiany sy ny fandaharanasa politika ihany ny fisian'ny vondron'olona voailikilika hiady amin'ny VIH/SIDA. Ao ihany koa ny fahasarotam-piainana sy ny halavirantany. Ao amin'ity lahatsary The Hub ity, ny Dr. Phillip Njemanze, any amin'ny fanjakana Imo, Nigeria, no manazava ny tolona atrehin'ny olona mitondra ny otrikaretina VIH any ambanivohitra mba hampaherezana ny hery fiarovana ao aminy:
Tsy misy fitsapana CD4 any ambanivohitry ny fanjakana Imo. Ny dikan'izany dia roa ihany ny ivotoerana ahafahana mandrefy ny CD4 ho an'ny fanjakana iray manontolo misy mponina 3 500 000. [..] Ny zavadehibe tokony atao dia ny fahafahana mivezivezy hanaovana fizahana sy mandeha any amin'ny misy ny marary.
Marihina fa ny lahatsary rehetra dia ao amin’ny lahatsoratra nadika avokoa
12 Aogositra 2008, 04:10